China DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3012 na Telescoping Aka emeputa na soplaya | Duoduo
DuoDuo ịkpakọba akpa Trolley DX3012 na Telescoping Aka
Nkebi nke ::DX3012
Mepee nha: 51 × 48.5x107CM
Akara okpukpu: 48.5x81x6.5CM
Ogologo ikpo okwu: 48.5x35CM
Nyere elu: Φ170mm
Agba: Agba ntụ & Nwa
Ihe: Metal & Plastic
Nha katọn: 82.5x49x20cm
Ọ bụ ibu ọrụ ibu ibu ibu, mara mma imewe na inogide, na addional plastic ịlesụ, ị nwere ike iji ya na ụzọ abụọ dị iche iche. Ọ dị mma maka iji ezinụlọ na ịpụ apụ. The wiil na ala efere bụ foldable, nke ukwuu na-azọpụta ohere ma na-eweta oké mma na anyị kwa ụbọchị ndụ na njem. Ọ dị mfe itinye n'ime ụgbọ ala anyị. Ejiri ala Aluminom mee ka efere ala, ibu dị arọ na nchara nchara, na-ewepụtakwa ihe mgbochi na nchekwa dị nchebe.
Aluminom mpịachi ibu aka ụgbọala sọrọ njikwa na grips bụ ezigbo maka ibu ọrụ na-achọ a n'aka ụgbọala na-apịaji maka njem ma ọ bụ nchekwa. Mgbe ọ bụla ị ga - ebugharị buru ibu, ihe dị arọ, ụgbọ ala aka bara uru nke ukwuu - agbanyeghị, nsogbu a na - ahụkarị bụ ebe ị ga - edobe ya mgbe emechara ya. Ọ bụ ya mere ụgbọ mpịachi aka a ji bụrụ ezigbo echiche. Mgbe anaghị eji ya, ọ na-agbadata na kọmpụta kọmpat, yabụ ọ dị mfe ịtinye na mgbidi ma ọ bụ na-echekwa n'ime kaboodu ma ọ bụ ogwe ụgbọ ala. Kọmpat mpịachi size dabara n'ime ụgbọala, gwongworo, ọbụna n'okpuru tebụl. The mfe Fold-up design na-eme ka ọ rụọ ọrụ ma dị mfe ịchekwa.
Trolley ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere aka ibugharị ihe dị arọ. Chekwaa azu gi ma buru ihe kwesiri ekwesi maka oru. Zuru oke maka ojiji n'ụlọ, ụlọ ọrụ, azụmahịa, njem ma ọ bụ ịzụ ahịa. Mee ka anyị bulie larịị. Ugwu-Ya! mpịachi aka gwongworo na dolly bụ ihe kachasịnụ iji megharịa ihe dị arọ. Chekwaa azu gi ma buru ihe kwesiri ekwesi maka oru. Ugbo ala a zuru oke maka ụlọ, ọfịs, azụmahịa, njem ma ọ bụ ịzụ ahịa.
Nke gara aga: DuoDuo ịkpakọba akpa Trolley DX3011 Na Telescoping Aka na Rubber Wheels
Osote: DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3013 na Wheels Portable Nrụgide oru Aluminom Collapsible akpa Cart
Aluminium ịkpakọba Trolley
Trolley akpa Trolley
Fechaa mpịachi Trolley N'ihi ibu
Obere Fkpakọba Akpa Trolley
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3013 na Whee ...
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3004 Atọ-Whe ...
DuoDuo ịkpakọba akpa Trolley DX3006 Arọ Dut ...
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3001 Foldable ...
DuoDuo ịkpakọba ibu Trolley DX3007 / DX3008 Al ...
Super ọkụ ire njikere ụgbọ mmiri 6 wiil atọ-whe ...